Ny iMac vaovao dia mitondra petadrindrina Apple hifanaraka amin'ny lokon'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Toni Cortes | | maro
iJustine dia efa nahazo ilay vaovao 24-inch iMacs. Ary miteny amin'ny plural aho satria tonga ny loko rehetra misy. Raha hanao doka dia tsy mitsitsy vola i Apple
Ary iray amin'ireo zavatra nahavariana indrindra iJustine, dia ilay sticker sticker malaza an'ny logo Apple izay tafiditra ao anaty boaty, dia tonga mba hifanaraka amin'ny lokon'ilay fitaovana. Ary ahoana no hitranga raha tsy izany, raiki-pitia amin'ny mavokely izy.
Androany zoma, ny iMac 24-inch voalohany dia hanomboka hatolotra amin'ireo mpampiasa izay efa nametraka ny kaomandiny andro lasa izay. Fa toy ny mahazatra, ny sasany malaza "plug in" YouTubers dia efa nahazo ny iMac vaovao mivantana avy amin'i Apple, ary ny voalohany "unboxings", Inona naneho hevitra izahay Omaly.
Ary ny iray amin'ireo toetra nanintona ny sain'ny iMac vaovao dia ny lokony. Ny solosaina birao vaovao an'ny Apple dia misy loko feno, miaraka amin'i alokaloka fito casing hafa hisafidianana.
Ary izy rehetra miaraka amin'ny loko boaty fampisehoana. Tady herinaratra, kitendry, totozy, sary an-tsaina, ary na ny sticker famantarana Apple aza tafiditra ao anaty boaty.
Araka ny asehon'i iJustine antsika, ao anaty boaty an'ny iMac vaovao dia misy sticker roa miaraka amin'ny paoma manaikitra. Miditra izy ireo alokaloka roa samy hafa, izay mifanitsy amin'ireo feo roa (mafy sy malefaka kokoa) an'ny iMac mihitsy.
Ny loko bebe kokoa Uploaded dia ny an'ny lafiny sy aoriana avy amin'ny efijery. Ny mihoatra akanjo, aseho ao amin'ny mivantana an'ny iMac, miaraka amina bezel fotsy. Natao ity mba tsy hanelingelina ny atiny eo amin'ny efijery.
ny Accessories ny loko mifanandrify toy ny Magic Trackpad sy Magic Keyboard vaovao dia tsy misy raha tsy amin'ny alàlan'ny fividianana iMac vaovao. Na dia mbola tsy nanamafy izany aza i Apple, dia manantena izahay fa hamidy misaraka ihany koa ireo fitaovana ireo amin'ny farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ny iMac vaovao dia mitondra petadrindrina Apple hifanaraka amin'ny lokon'ilay fitaovana
Ny fivarotana Apple dia hitahiry ny iMac vaovao 24 "amin'ny zoma
14 "sy 16" MacBook Pro miaraka amin'ny Apple Silicon sy M2 hanomboka amin'ity fahavaratra ity